January 2012 ~ Rohingya Blogger
STATUS ILLEGAL: THE ROHINGYAS OF BURMA - FILM and DEBATE
Date :Thursday9Feb 2012, Time : 16.00-18.00 The Rohingyas,aMuslim minority group in Burma, were made stateless in 1982 by the military dictatorship. Thousands of Rohingyas have fled brutal suppression in their home country to poverty, misery and abuse in neighbouring Bangladesh. Bangladesh does not accept them as refugees while Burma don´t want them back.This film describes the nightmarish legal limbo they are living in.
The Rohingyas of Burma are stateless and have been living in misery for decades. They areaforgotten people. Why is it so difficult to findasolution to their situation and to give themalife with dignity? We screen the film The Exodus of The Rohingyas, which is followed byadebate: Participants: Tun Khin, President of the Burmese Rohingya Organization UK. Johan Meyer, Refugee Policy Director at the Norwegian Ministry of Foreign Affairs.
Erik Abild, Political Advisor at the Norwegian Refugee Council. Moderator: Kristian Stokke, Professor at the Department of Sociology and Human Geography, University of Oslo. _________________________________________________
About the Rohingyas (in Norwegian) here Velkommen - og spre gjerne videre! Se også hele festivalprogrammet !
Vennlig hilsen Åse Sand Den norske Burmakomité / Norwegian Burma Committee Det norske menneskerettighetshuset Kirkegata50153 Oslo, Norge Mobil: + 47 915 76 251 www.burma.no www.twitter.com/Burmakomite
ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ် Tomás Ojea Quintana မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်
Mr.Tomás Ojea Quintana မြန်မာအစိုးရ၏ ဖိတ်ကြားချက အရ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေများကို အကဲဖြတ်ရန် မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ် Tomás Ojea Quintana သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဇန်န၀ါရီလ ၃၁ ရက်နေ့က ရောက်ရှိလာကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
“မြန်မာနိုင်ငံမှာ သိသာထင်ရှားတဲ့ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ အားလုံး မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ပါပဲ။ အခုလာတဲ့အဖွဲ့က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းမှာ အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာ လာရောက်တာပါ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ၂၀၁၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လမှာ သွားရောက်ခဲ့တဲ့ ခရီးစဉ်နောက်ဆက်တွဲ အနေနဲ့ရော ယခု တိုးတက်မှုတွေအရ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေကို အကဲဖြတ်ဖို့ပါ”ဟု မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ် Tomás Ojea Quintana က ဇန်န၀ါရီလ ၃၀ ရက်နေ့က ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ် Tomás Ojea Quintana ၏ ခြောက်ရက်ကြာမြင့်မည့် မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ်အတွင်း အစိုးရတာဝန်ရှိသူများ၊ အရပ်ဘက် လူ့အဖွဲ့အစည်း တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံရန်ရှိကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။
ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ် Tomás Ojea Quintana သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၂၀၀၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လက ပထမဆုံးလာရောက်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ၂၀၀၈ ခုနှစ် မေလမှ စ၍ စတင်ဆောင်ရွက်နေသည်။ ၎င်းနောက်ဆုံး လာရောက်ခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်မှာ ၂၀၁၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လက ဖြစ်သည်။
Cameron hails 'brilliant' Suu Kyi
David William Donald Cameron , Prime Minister of the United Kingdom
(UKPA) David Cameron has hailed Burmese pro-democracy leader and Nobel laureate Aung Sang Suu Kyi asa"figure of brilliance" who should steer the West's response to the opening up of Burma.
The Prime Minister was speaking after EU leaders in Brussels vowed to ease EU "restrictive measures" following her release after seven years of house arrest in November 2010.
A summit statement said important changes taking place in Burma "are opening up important new prospects for developing the relationship between the European Union and Burma".
Mr Cameron commented: "I spoke to Aung Sang Suu Kyi at the weekend and asked her about how quickly she thought the re-engagement process should take place between countries in the West in the EU, with the Burmese regime.
"I think it is very important that we listen carefully to her, an absolute figure of brilliance in terms of what she has been through and what she is now going to achieve in that country.
"I think the message is that, yes, we should be engaging, but we should do it in stages and we should look very carefully to make sure that the by-elections that they are going to hold are fair, that prisoners go on being released, that they go on opening up and moving towards democracy.
"And as they do that I think there are opportunities for the EU and I'm delighted that the council (summit) has made suchaclear statement tonight."
The EU statement said: "We will continue to ease the EU's restrictive measures if pour expectations are met. The members of the European Council reiterate the EU's readiness to assist Burma in advancing reforms."
We Are Flying To Be Free အခမ်းအနားတွင်ကိုမင်းကိုနိုင်ပြောကြားခဲ့သောအမှာစကား
ဒီနေ့ ဒီလိုပွဲမျိုးကို ယောင်လို့တောင် မမက်ခဲ့ဖူးပါဘူး။ ကျွန်တော့်အရှေ့က နောင်တော်အစ်မတော်တွေဟာ ဟိုး ၁၉၆၂ ဇူလိုင် ၇ အရေးတော်ပုံကတည်းက စပြီး ကျောင်း သားအရေးတော်ပုံတွေ စခဲ့တာ။ ဒီမိုကရေစီအရေးတိုက် ပွဲတွေ ဝင်ခဲ့တာ ရခဲ့သမျှတွေဟာ ဆုလာဒ်တွေ မရှိခဲ့ပါ ဘူး။ နံပါတ်တုတ်တွေ မျက်ရည်ယိုဗုံးတွေ၊ သံဆူးကြိုး တွေ၊ လက်ထိပ်တွေ၊ ခြေထိပ်တွေ၊ ခြေကျင်းတွေ ပြီး တော့ အုတ်နံရံလေးဘက်ကြားကို ရောက်ရတယ်။ စစ် ကြောရေး စခန်းတွေထဲမှာ လူစဉ်မမီအောင် ဘဝပေးခဲ့ ရတာတွေ အများကြီးပါ။ ကျွန်တော်တို့ရှေ့က အစ်ကို တော် အစ်မတော်တွေ ပေးဆပ်ခဲ့ရတဲ့အပေါ် ကျွန်တော် တို့ လိုက်ပါခဲ့ရတာပါ။ ဒီနေ့ ဒီအချိန်မီးရောင်စုံတွေနဲ့ ပြိုးပျက်နေတဲ့ အပြုံးတွေကြားထဲမှာ ပြန်ဆုံကြတယ်ဆို ပေမယ့် တကယ်ဆိုရင် ကြည်နူးဖို့ ကောင်းတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ အပြည့်အဝ မကြည်နူးနိုင်ဘူး။ ခုပဲ ကျွန်တော့်ကို ထောင်ထဲမှာ တစ်ယောက်တည်းကျန် ခဲ့တဲ့ ရဲဘော်တွေဆီက သတင်းစကားတွေ၊ စာတိုလေး တွေ ကျွန်တော့်ဆီ ရောက်လာတယ်။ စင်ရဲ့ နောက်မှာ ပဲ ကျွန်တော်ဖတ်ရတော့ ဆို့ဆို့နင့်နင့် ခံစားရပါတယ်။ အို ကံတရားက သူတို့ကိုမှ ရွေးပြီးတော့ ရက်ရက်စက် စက် နှိပ်ကွက်လေရော့သလား တွေးမိပါတယ်။ အများ ကြီး ပြန်လာကြတဲ့အထဲမှာ ဘာလို့ သူတို့ ကျန်နေခဲ့တာ လဲ။ တစ်ခုခုတော့ မှားနေပြီ။ လူတွေရဲ့ ဘဝ၊ လူတွေ ရဲ့ အသက်ကို အဲသလို အလောင်းအထပ်တွေ လုပ်တာ မျိုးတွေ၊ သံသယတွေ ထပ်ပြီး မခံစားနိုင်တော့ပါ။ လူတွေရဲ့ ဘဝတွေ မိခင်တွေရဲ့ မျက်ရည်တွေကို ပေး ဆပ်ပြီးတော့မှ အပေးအယူလုပ်ရတဲ့ စနစ်ဆိုးကြီးတွေ အမြစ်မကျန်အောင် ကျွန်တော်တို့ လက်ကျန်ဘဝတွေ ကို ဆက်ပြီး လိုအပ်ရင် ပေးဖို့ အသင့်ပါပဲလို့ ကြုံတုန်း ကတိပြုပါတယ်။ ကျွန်တော် ဘာမှ ပြင်ဆင်မထားရ ဘူး။ ဒီလိုပွဲမျိုးဟာ အပြည့်အဝ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ခံစားလို့ ကောင်းတယ်ဆိုပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ စိတ်ထဲ မှာ လိပ်ပြာမလုံဘူးဗျာ။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကျွန် တော်ဆိုရင် သရက်ထောင်ထဲမှာ တစ်ယောက်တည်းကျန် ခဲ့တဲ့ ကိုသန်းဇော်ရဲ့ မျက်နှာကို စေ့စေ့မကြည့်ဘဲနဲ့ ကျွန် တော်ကျောခိုင်းပြီး ထွက်ခဲ့ရတာ။ တစ်ယောက်တည်း ကျန်ခဲ့တဲ့သူတွေ အများကြီးရှိတယ်။ သူတို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေ ပေးရပါမယ်။ အဲ ဒီအတွက် ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်။ ဟောဒီအားလုံးက သူတို့ ကြားသွားအောင် စကားတစ်ခွန်းလောက်များ အတူတကွ ပြောပေးနိုင်ကြမလားလို့ ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသမားများ၊ အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်ပါ စေ ဆိုတာလောက်ပါပဲ။ ထောင်နံရံတွေ ပဲ့တင်ထပ်သွား အောင် ကျွန်တော်တို့ အော်နိုင်ပါတယ်။ စဉ်းစားထား တာ ညီအစ်ကိုတွေ ပြန်ဆုံချိန်တစ်နေ့နေ့မှာတော့ ဒေါ်လာ တွေကို ရောင်စုံပုသိမ်ထီးကလေးလုပ်ပြီး မြိုင်မြိုင်ဆိုင် ဆိုင် ခါးပတ်တွေကြားမှာ ဧရာဝတီဆိုတဲ့ အသံ ဦးရွှေ ရိုးကနိုင်ပါစေဆိုပြီး ကျွန်တော်က ကဗျာဆန်ဆန်တွေး လာခဲ့ပေမဲ့ ညီအစ်ကိုတွေ ပြန်မဆုံနိုင်သေးဘူး။ ဘာဖြစ် လို့လဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လျှာတွေကပဲ ခါးလို့လား စနစ် ဆိုးရဲ့ အသီးကပဲ ခါးနေသလား၊ ကျွန်တော်စဉ်းစား တယ်။ ကျွန်တော် သိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လျှာတွေ ခါးလို့ မဟုတ်ဘူး။ စနစ်ဆိုးကိုက ခါးနေလို့ပါ။ ခေတ် သစ်စနစ်သစ်တစ်ခုရဲ့ ချိုမြိန်တဲ့ အရသာကို ကျွန်တော် တို့လည်း ငတ်ငတ်မွတ်မွတ်ကြီး သုံးဆောင်ချင်လှပါပြီ။ နောက်လာမယ့် မျိုးဆက်တွေအတွက်ပါ ကျွန်တော်တို့ အပင်စိုက်သူတွေလို စိုက်ခဲ့တဲ့ အပင်ဟာ ၂၃ နှစ်အကြာ မှာ တစ်စုံတရာသော အတိုင်းအတာ ရောက်ခဲ့ပါပြီ။ သီးချိန်တန်ပါပြီ။ ပွင့်ချိန်တန်ပါပြီ။ အဲဒီ အသီးအပွင့် တွေကို ဆက်ပြီးခံစားဖို့အတွက် ထိန်းသိမ်းဖို့ တာဝန်ရှိ ပါတယ်။ စောင့်ရှောက်ဖို့ တာဝန်ရှိပါတယ်။ အသီးအ ပွင့်တွေကို ဝိုင်းပြီး ကာကွယ်ကြမယ်မဟုတ်လား။
(ခဏ သူတို့ ဘာဖြစ်ချင်လဲ မေးလိုက်ဦးမယ်) ကျွန်တော်အသံ ကောင်းတဲ့ သူလည်းမဟုတ်လို့ ထောင်ထဲမှာကျတော့ နောက်ဆုံးရေးခဲ့တဲ့ သီချင်းရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ် တိုင်က ရေးသားပြီးတော့ ကျွန်တော်နဲ့ အတူနေခဲ့တွဲ့နညနမအေငသညျွှလေန က ကိုရဲခေါင်ထွဋ်က သံစဉ်ကို တာဝန်ယူထားပါတယ်။ အဲဒီသီချင်းကိုပဲ ကျွန်တော့် ညီ၊ ညီမတွေက ဝိုင်းပြီး ဆိုမယ်ဆိုရင် ပိုပြီး ကျက်သရေ မင်္ဂလာ ရှိမယ်။ ပြီးတော့ ခမ်းနားမယ် မြင်ပါတယ်။ သဘောတူပါလား။(တူပါတယ်ဟုသံပြိုင်အသံနှင့်လက်ခုပ်သံများ)
မမီးမီး ခေါ် မသင်းသင်းအေး ပွဲမကျင်းပမီ မြင်ကွင်း
ဘလော့ဂါ နေဖုန်းလတ် ကို ကိုကိုကြီး ကျေးဇူတင်စကားပြောကြားစဉ် မနိုဘယ်အေး ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ အမှတ်တရဓါတ်ပုံကို ကိုမင်းကိုနိုင်က ဒေါ်ရွှေဇီးကွက်ထံမှ လက်ခံရယူပြီးကျေးဇူးတင်စကားပြောကြား Source : YPI & Messenger Journal
Jamia Milia Islamia တက္ကသိုလ်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဂုဏ်ထူးဆောင် ဒေါက်တာဘွဲ့ အပ်နှင်းမည်
Honorable Canadian Award
နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ကျော်မျှ ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲဝင်လာခဲ့သည်ကို အသိအမှတ်ပြုသည့်အနေဖြင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဒေလီမြို့ရှိJamia Milia Islamia တက္ကသိုလ်က မကြာမီ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဂုဏ်ထူးဆောင် ဒေါက်တာဘွဲ့ အပ်နှင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ "ကျွန်တော်တို့ တက္ကသိုလ်က အထူးအစည်းအဝေး ခေါ်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဂုဏ်ထူးဆောင် ဒေါက်တာဘွဲ့ချီးမြှင့်ဖို့ ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ပြီး ဘွဲ့အပ်နှင်းမယ့်အကြောင်း ပြောမယ်၊ တစ်ကယ်လို့ သူကလက်ခံနိုင် မယ်ဆိုရင်၊ ဒီကိုလည်း လာရောက်ဖို့ အချိန်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် အထူးတွေ့ဆုံပွဲနဲ့ ဘွဲ့အပ်နှင်းဖို့ရှိပါတယ်"ဟု Vice Chancellor ဖြစ်သူ Najeeb Jungက တက္ကသိုလ်တွင် ပြုလုပ်နေသော "Myanmar: Bridging South and Southeast Asia" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဟောပြောနေစဉ် ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
source: Calcutta News _________________________________________________________
Jamia wants to honour Aung San Suu Kyi
New Delhi, After honouring living legends like the Dalai Lama and Amartya Sen, Jamia Milia Islamia wants to confer an honourary doctorate on Myanmar's pro-democracy icon Aung San Suu Kyi. Suu Kyi, who had spent almost 15 years under house arrest under Myanmar's military junta, is among the names that have been discussed by the University for bestowing the honour. Sources said while the University was keen to honour the symbol of resistance againstatotalitarian regime, the process of accomplishing this wasalong one. "Her name has been suggested at the University's decision-making bodies during discussions on the kind of people we would like to honour," saidasource.
Vice Chancellor Najeeb Jung too said ataseminar at the University that the institution would like to extend this honour to the Myanmar icon. Jamia had in 2010 honoured Tibetan spiritual leader the Dalai Lama wuth an honourary degree, followed by another Nobel Laureate Sen, whose work on welfare economics, particularly on the causes of famine, has won him international acclaim. Suu Kyi, who is now onacampaign trail for an upcoming parliamentary byelection, won the Nobel Prize for Peace in 1991 for her indefatigable struggle for democracy and human rights in her country.
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည့် ဂုဏ်ပြုဆုများ
Daw Aung San Suu Kyi’s International Awards, Honors & Appointments ( 1990-20 12 )
10. Honorary President Students’ Union London School of Economics and Political Science (UK) 1992
11. Honorary Member International PEN (English Center) 1992
19. Rose Prize arbejderbevaegelsens International Forum/ International Forum of
the Danish Labour Movement, Copehagen 1993
20. Victor Jara International Human Rights Center for Human Rights and Constitutional Law,
Los Angeles, USA 1993
25. Premio Mujer Progresista (Federacion Mujeres Progresistas / Spanish Federation of
Progressive Women, Madrid) 1993
35. Companion of the Order of Australia 1996
46. Distinguished Alumni Award Central University/ Delhi University 1997
47. Honorary Citizenship of Rome (Italy) (May 23, 1997)
65. International Social Welfare Prize University of Southern California School of Social Work
(December 8) 2001
72. Honorary Doctorate in Politics, Philosophy and Economics Rangsit University,
Thailand 13/ 12/ 2004
73. Outstanding Women in Buddhism United Nations Gender and Religious Department 8/ 03/ 2005
82. An honorary doctorate (LLD) honoris causa Award from University of Cape Town,
South Africa, December 2007
90. Catalonia International Prize 2008, MOTHERS OF COURAGE (shard with Dr. Cynthia Maung),
96. Democracy and Peace Award of Japanese Diet Member’s League Japanese Diet Members’
League in support of Democracy in Myanmar, Tokyo, Japan (2009, June 19)
97. The Honorary Doctor of Laws (LLD) at Derry’s Millennium Forum, the University of Ulster in Derry,
Ireland, UK on Tuesday, July 7, 2009. (2009, June 24)
98. The Ambassador of Conscience Award the recipient of Amnesty International’s highest honorary
(Irish band U2 is publicly announcing Aung San Suu Kyi’s award Monday night ataDublin concert.)
(2009, July 27)
99. Benazir Bhutto Shaheed Award for Democracy instituted. The Pakistan People’s Party,
Islamabad, Pakistan. (2010, June 21)
100. Honorary Individual Membership. Council of Asian Liberals and Democrats
(CALD) (2010, June 29)
101. Queen of Myanmar’s Democracy and Human Rights. Manav Ekta Parishad, India
(2010, November 25)
103. ‘Shaheed Benazir Bhutto Award for Democracy (2012 ,Janauary 25).....
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရန် လှုပ်ရှားခဲ့သူ GWလူငယ်များ ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲ
By ဇာဏီ ၊
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေး ပိုစတာ ကမ်ပိန်းပြုလုပ်ခဲ့လို့ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များ အစည်းအရုံး(GW)မှ ကိုဝေဖြိုး နှင့် ကိုဇာနည်ထွန်း တို့ကို ပြည်မြို့နယ် တရားရုံးမှ စီရင်ချက် ချဖို့ ဒီကနေ့ ရုံးချိန်းခေါ်ထားပြီး စီရင်ချက် မချဖြစ်ပဲ လာမည့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ ရက်နေ့သို့ ရွှေ့ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။
"ဗီနိုင်းစ ဆိုတာ မြန်မာပြည်မှာ ကြော်ငြာတွေ ပိုစတာတွေ အများကြီး ထုတ်ကြတယ်။ ကလေးတွေက နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေး ဗီနိုင်းစတွေကို ပြည်မှာရော ၊ အင်းမ ဘက်မှာရော ကပ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ကပ်လဲ ဆိုတော့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လွတ်ချင်လို့ ကပ်တယ်။ အဲတာကို ကပ်ပေမယ့် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုနဲ့ မငြိဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပုံနှိပ်ဆိုတာ စာရွက်ပေါ်မှာပဲ ပုံနှိပ်လို့ရတာ အခုဟာက ဗီနိုင်းစ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဗီနိုင်းစက်ပေါ်မှာပဲ လုပ်လို့ရတယ်။ အဲစက်က ဘယ်ကရလဲဆိုတော့ ဒီကလေးတွေမှာ မရှိဘူးလေ။ GW က ဇေယျာသော် ပေးလို့ ကျနော်တို့ ကပ်တယ်ဆိုတာ ဝန်ခံတယ်။ အဲတာကို ပုံနှိပ်ဥပဒေအရ မငြိဘူးဆိုတာကို ဒီနေ့ ငြင်းထားတယ်လေ ။အဲတော့ သဘက်ခါကို အမိန့်ချမယ်။ ၁၉၆၂ခုနှစ်၊ ပုံနှိပ်သူများနှင့် ထုတ်ဝေသူများ မှတ်ပုံတင် ဥပဒေဆိုတာ စာရွက်၊စာတမ်း စသည်ဖြင့် အဲတာတွေပေါ်မှာပဲ ချလို့ရတာ။အဲတာကြောင့် ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေခွင့်ကို ငြင်းထားတယ်။ အဲတာကို ဒီနေ့ အမိန့်ချမယ်ဆိုပြီး လုပ်တယ်။ ရုံးချိန်းသို့ Generation Wave (မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များ အစည်းအရုံး)မှ ကလေးတွေအပါအဝင် လူ ၃၀၊၄၀ လောက် လာရောက်နားထောင်ကြပါတယ်။ အဲလို လူတွေများတော့ သူတို့ အမိန့်မချဖြစ်ပဲ တရားရုံးက ရုံးချိန် မရှိဘူးဆိုပြီး ဖေဖော်ဝါရီ ၂ ရက်နေ့ကို ပြောင်းလိုက်တယ်။ " လို့ တရားခံ၏ အကျိုးဆောင် ရှေ့နေဦးမြင့်အေးက ဘားမား ဗီဂျေကို ပြောပါတယ်။
" သူ ထောင်ကျသွားပစေ။ ကိစ္စ မရှိဘူး။ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးဖို့ သူ ကပ်တယ်။ အဲဒီ ကပ်တာမှာ သူ မလွတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လွတ်နေတယ်။ အဲတာကို သူ ဝမ်းသာတယ်"လို့ ကိုဇာနည်ထွန်းက ရုံးချိန်းထွက်လာစဉ် သူရဲ့ရှေ့နေ ဦးမြင့်အေးကို ပြောခဲ့ပါတယ်။ " အခု နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို သမ္မတကြီးက လွှတ်နေတယ်။ လာမည့် ၁၃ ရက်နေ့မှာလဲ လွှတ်မယ်လို့ ကြားနေရတယ်။ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို လွှတ်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒနဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဗီနိုင်းပိုစတာတွေ လိုက်ကပ်တဲ့ ကျနော့ အမှုသည်နှစ်ယောက်က မလွတ်သေးတာတော့ ကျနော်တော်တော် စိတ်မကောင်းဘူး။ ဒီအမှုမှာ တရားဥပဒေက စိုးမိုးလိမ့်မယ်လို့ ကျနော်ယူဆတယ်။ တရားသူကြီးချုပ် ဦးမြင့်ဆွေကလည်း တရားဥပဒေအတိုင်း ဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်။ တရားသေ လွှတ်ရတော့မယ်လို့ ကျနော် ယူဆပါတယ်။"လို့ တရားခံ၏ အကျိုးဆောင် ရှေ့နေဦးမြင့်အေးက ဘားမား ဗီဂျေကို ပြောပါတယ်။
ကိုဝေဖြိုးနှင့် ကိုဇာနည်ထွန်းတို့သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၂ ရက်နေ့က ပြည်မြို့နှင့် အင်းမမြို့တို့တွင် ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျသူများ လွတ်မြောက်ရေး ဗွီနိုင်းပိုစတာများကို ကပ်ခဲ့သူများဖြစ်ပြီး အင်းမ ရဲစခန်းမှ ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၁၉၆၂ခုနှစ်၊ ပုံနှိပ်သူများနှင့် ထုတ်ဝေသူများ မှတ်ပုံတင် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၇ နှင့် တရားစွဲဆို ခံထားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံနှိပ် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၇ သည် အနိမ့်ဆုံး ထောင်ဒဏ် ၁ နှစ်မှ အမြင့်ဆုံး ထောင်ဒဏ် ၇ နှစ်ထိ အပြစ်ဒဏ် ချမှတ်လို့ရပါတယ်။
တရားခံ၏ အကျိုးဆောင် ရှေ့နေဦးမြင့်အေးမှ အပြီးသတ် လျှောက်လဲချက်
Source : Burma VJ
ရိုဟင်ဂျာ ဟာ ရခိုင်လူမျိုးနဲ့ မဆိုင်ပါဘူးဟု ရခိုင်စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်ကြေညာ” ဟူသောသတင်းဆောင်းပါးအား တုန့်ပြန်ဖြေကြားချက်။
ရိုဟင်ဂျာဟာ ရခိုင်လူမျိုးနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး၊ ယခင် ARAKAN, ယခုရခိုင်ပြည်မှာကိုယ်ပိုင်စာပေ၊
ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှု၊ ကိုယ်ပိုင်ရိုးရာဓလေ့ထုံးစံ သီးသန့်ရှိနေတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ကြောင်း၊
First Weekly, Vol 1, No.11 မှာတပတ်အရင်က မေသဒ္ဓါရေးသားဖေါ်ပြထားတဲ့ “ရိုဟင်ဂျာ
ဟာ ရခိုင်လူမျိုးနဲ့ မဆိုင်ပါဘူးဟု ရခိုင်စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်ကြေညာ”
နေ့စွဲ့။ ။၃၀ ရက်၊ဇန္နဝါရီလ၊၂၀၁၂ ခုနှစ်။
ရခိုင်စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဥက္ကဌ ဒေါ်စောခင်တင့် ၊ဒုဥက္ကဌ ဦးသန်းမောင်၊ အတွင်းရေးမှူး
ဦးလှမြင့် အပါအဝင် ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ၁၆၀၀၀ ကျော်အမည်နှင့်လက်မှတ်ပါသူများအားပထမဆုံး
ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ရခိုင်လူမျိုးနှစ်မျိုးစလုံးကိုရောပြီ်း ARAKAN လို့ဘယ်သူတွေကခေါ်တာလဲ?ဆိုတာပါဘဲ။
ကမ္ဘာ့သမိုင်းသုတေသီများရဲ့အဆိုအရတော့ ARAKAN ဆိုတာဟာ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ
ခေတ် (အာဏာရှင်ခေတ်) ကပြောင်းပေးလိုက်တဲ့ ယခုရခိုင်ပြည်ကိုခေါ်တာလို့ အားလုံးကသိကြပါတယ်။
အာဏာရှင်မတိုင်ခင်ကတော့ ယခုရခိုင်ပြည်ကို ARAKAN ပေါ့။အဲဒီ ARAKAN ဒေသမှာနေတဲ့လူတွေအား
လုံးကို ARAKANESE ပေါ့။ဒါရှင်းပါတယ်။ ARAKAN မှာနေတဲ့လူဟာ ARAKANESE ဖြစ်ရမှာပေါ့။
BURMAမှာနေတဲ့လူတွေကို BURMESE လို့ခေါ်သလိုပေါ့။
ဒါပေမဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့နာမည်အပြင် ARAKANNYA လို့သုံးကြတာတော့ရှိပါတယ်။အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ARAKAN မှာနေတဲ့လူလို့ပြောကြတာပါဘဲ။
အားလုံးသိထားတာကလဲအာရ်ကန်မှာရခိုင်လူမျိူးတစ်မျိုးတည်းနေနေကြတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါဘဲ။ဒါကြောင့်ရခိုင်လူမျိူးတစ်မျိုးတည်းကိုဘဲARAKAN,ARAKANESEလို့ခေါ်တယ်ဆိုရင်………………”မရှိကိုအရှိလုပ်၊အရှိကိုမရှိလုပ်၊” တတ်တဲ့ အင်မတန်မှသေးနုပ်သိမ်ဖျင်းတဲ့အယူသည်းမှုရှိနေတဲ့ လူမျိုးကြီးဝါဒကို လက်ကိုင်စွဲထားတဲ့ တစ်ပါတီအာဏာရှင်စနစ်၊စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအားပေးထောက်ခံထားနေဆဲဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆန့်ကျင်ရေးသမားတွေဘဲ ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
First Weekly, Vol 1, No.11 မှာတပတ်အရင်က မေသဒ္ဓါရေးသားဖေါ်ပြထားတဲ့ “ရိုဟင်ဂျာဟာ ရခိုင်လူမျိုးနဲ့ မဆိုင်ပါဘူးဟု ရခိုင်စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်ကြေညာ”ဟူသောသတင်းဆောင်းပါး
Khin Nyunt has more than freedom to be happy about By Mark Farmaner (BCUK)
Ex-PM U Khin Nyunt
When Burmese President Thein Sein came to power there wasalot of speculation that he would just beapuppet, with Than Shwe following the Ne Win model of pulling strings behind the scenes. But if anyone has been pulling strings behind the scenes, even if not literally, it has been Khin Nyunt. President Thein Sein speak in Parliament. Photo: Mizzima The agenda followed by Thein Sein appears so eerily similar to initiatives by Khin Nyunt, the ousted intelligence chief and prime minister, that they could be using the same blueprint. The difference now is that Than Shwe isn’t there to block its implementation.
Khin Nyunt wanted an end to Burma’s pariah status. He wanted Burma to becomeamore modern and powerful country, taking its rightful place in the region and the world. To do this, he understood that there would have to be some kind of accommodation with Aung San Suu Kyi. He understood that the horrific human rights abuses committed in ethnic states was damaging to Burma’s reputation, and that the conflict needed to be ended. That is not to say he wasatrue reformer, far from it. As U.S. diplomatic cable from August 2005, released by Wikileaks, revealed, “The hypothesis being that the disgraced prime minister wasamoderate orareformer who lost out to the hard-liners inapower struggle ... General Khin Nyunt wasahard-liner, albeitamore polished and approachable one. He wasapragmatist who cultivated foreign countries andapurported dialogue with the opposition simply asameans to mollify the international community and perpetuate the regime’s absolute control.”
This is the man who ran Burma’s torture chambers. He knew about horrific abuses taking place such as the use of rape asaweapon of war by the Burmese Army, but denied it. He defended the dictatorship internationally, and was effective in doing so.
Thein Sein hasasimilar track record of direct links to human rights abuses and defending the dictatorship on the international stage. He was twice named by the U.N. special rapporteur on human rights in Burma for ordering his troops to commit human rights abuses while he wasaregional commander in Shan State. He mastered skills in delaying and duping the international community while representing the regime onacommittee to tackle the use of child soldiers, and later became the international face of the dictatorship, as Khin Nyunt had done, in the role of prime minister.
The similarities between the political approaches of Khin Nyunt and Thein Sein were evident from the moment Thein Sein became president. Thein Sein’s headline-grabbing inaugural speech to Parliament had echoes of the language used by Khin Nyunt. There wasamore open acknowledgement of problems that existed and promises that action would be taken to address them.
Khin Nyunt expended political capital negotiating with Aung San Suu Kyi to bring her and her party, the National League for Democracy (NLD), into the National Convention. Indeed, it is thought an agreement was almost in place before he was arrested and placed under house arrest.
Thein Sein has also done the same, reaching agreement for the NLD to enter Parliament. Khin Nyunt also negotiated cease-fire agreements with armed ethnic political parties, as Thein Sein has belatedly started to do after first breaking three cease-fires. In another similarity, negotiations addressing the political issues at the root cause of the conflict have also been put off untilalater date. In the case of the round of cease-fire agreements made 20 years ago, that later date never arrived.
In 2003, Khun Nyunt announced the seven-stage roadmap which would lead to the drafting ofanew constitution and elections. This was widely seen at the time as designed to head off proposed international sanctions following the detention of Aung San Suu Kyi following the Depayin Massacre. Thein Sein chaired the National Convention drafting the principles of that Constitution, and led the pro-military party into the elections.
Khin Nyunt also knew the value of engaging with the international community. Like Thein Sein, and in stark contrast to Than Shwe who often claimed to be “too busy,” he is much more willing to meet diplomats and visiting ministers.
This wasatactic that Khin Nyunt found highly effective. Many diplomats and U.N. officials based in Burma fell under his spell, just as many appear to have fallen under the spell of Thein Sein now.
There are undoubtedly similarities in approach between Thein Sein and Khin Nyunt. The big question: is the end goal the same? Khin Nyunt’s end goal wasn’t democracy and human rights. It was about taking off the rough edges off the dictatorship in order to get sanctions lifted and international legitimacy. Thein Sein has gone further than Khun Nyunt was able to go. However, despite some very welcome developments, it is noticeable that so far no repressive laws have been repealed, and no power relinquished at all. Inarecent interview with the Washington Post, President Thein Sein pointedly refused to makeacommitment to repeal censorship laws instead saying; ‘The media needs to take responsibility and proper actions. Media freedom will be based on the accountability they have.”
If Thein Sein wants to show he isareal reformer, he needs to go beyond “Plan Khin Nyunt” and implement deeper reforms, such as repealing repressive laws and bringing in new laws which guarantee the rule of law andademocratic society.
So far, however, it just looks like Khin Nyunt’s plan, which along with his new freedom, gives Khin Nyunt more than one reason to be happy.__________________________________________________________________Mark Farmaner is director of Burma Campaign UK Source : (Commentary) – MIzzima
(မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း) ရှင်းပြတဲ့ ငါးထောင်တန် လက်ကိုင်ဖုန်းလိုင်း
ဧရာဝတီဝိုင်းတော်သားတယောက် သုံးတဲ့ လက်ကိုင်ဖုန်း နဲ့ card ။ ထိုင်းမှာ ၀ယ်တယ်။
ဖုန်းတန်ဖိုး - ဘတ် ၆၀၀ ($ 20)
sim card တန်ဖိုး - ၄၉ ဘတ် ($2ခန့်)
MPT (မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း) ၀က်ဆိုက် www.mcpt.gov.mm မှာ တွေ့ရတဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ကို ကူးယူ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ လူပြောများနေတဲ့ လက်ကိုင်ဖုန်းလိုင်းတခု ငါးထောင်တန် အစီအစဉ်ဟာ လောလောဆယ်မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ ရှင်းထားပါတယ်။ မကြာခင်အနာဂတ်မှာ sim card တခု ကျပ် ၅၀၀၀ ($6ခန့်) ဖြစ်လာမယ် ဆိုပြီး မီဒီယာမှာ သတင်း ဖော်ပြနေကြတာကို တုန့်ပြန်ထားတာပါ။
ရက်စွဲတပ်မထားတဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ပါ။ တံဆိပ်တုံးမှာပါတဲ့ ခပ်ဝါးဝါး ဂဏန်းများအရ မနေ့ကထုတ်ပြန်တယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
ဒီနေ့ အစိုးရထုတ် သတင်းစာမှာ ဒီထုတ်ပြန်ချက်အကြောင်း အခုလို ဖော်ပြထားပါတယ်။
Source : Irrawaddy Blog
မက္ကာ ဘုရားဖူး ၁၀၀၀ ခန့် လေကြောင်းလိုင်းကြောင့် ခရီးစဉ်ပျက်
ဆော်ဒီအာရေဗျ နိုင်ငံ မက္ကာမြို့သို့ ဘုရားဖူးသွားရောက်မည့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အစ္စလမ် ဘာသာဝင် ၁၀၀၀ နီးပါး လေကြောင်းလိုင်း အခက်အခဲကြောင့်ရန်ကုန်လေဆိပ်တွင် တရက်တာ နေထိုင်ခဲ့ရပြီးနောက် ခရီးစဉ်ကို ဖျက်သိမ်းခဲ့ရကြောင်း သတင်းရသည်။
ဆော်ဒီအာရေဗျ နိုင်ငံ မက္ကာမြို့ ဟာ့ဂ်ျ ဘုရားဖူးများ
အဆိုပါ ဘုရားဖူး ၉၉၈ ဦးသည် ပြီးခဲ့သည့် အပတ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နံနက်မှစတင်ကာ ကြာသပတေးနေ့ နံနက်တိုင် လေယာဉ်ကွင်း အတွင်း စားသောက်၊ နေထိုင်မှု အခက်အခဲများဖြင့် ညအိပ်စောင့်ခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော် လေယာဉ်မလာရောက်သည့်အတွက် ခရီးစဉ် ကို ဖျက်သိမ်းခဲ့ရကြောင်း ဘုရားဖူးများက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
Gulf လေကြောင်းလိုင်းနှင့် Mansik လေကြောင်းလိုင်းတို့ကို ခရီးသွားကုမ္ပဏီများက စုပေါင်း ငှားရမ်းထားသော်လည်း ငှားရမ်းခနှုန်း ညှိနှိုင်းမရသောကြောင့် လေယာဉ်မလာခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဘုရားဖူးအဖွဲ့ဝင် ပြည်မြို့မှ ဦးတင်ဝင်းက“လေဆိပ်မှာ တနေ့နဲ့တည အစားအသောက်၊ သောက်ရေအထိ အားလုံးအခက်အခဲ ဖြစ် ခဲ့ရတယ်၊ ဘယ် အစ္စလမ်ဘာသာရေး အဖွဲ့ကမှ လာပြီးမကူညီဘူး၊ ခရီးသွား ကုမ္ပဏီတွေကလည်း ရှောင်နေတယ်၊ ရန်ကုန်က လူတွေ ကူညီလို့သာ စားရသောက်ရတာ”ဟု ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ တနှစ်လျှင် အစ္စလမ်ဘာသာဝင် ဦးရေ ၅၀၀၀ ခန့် နှစ်စဉ်သွားရောက် ဘုရားဖူးခွင့် ပြုထားရာ မြန်မာနိုင်ငံ ဟာဂျီ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့မှ ဦးစီးကာ City World ၊ ချို ဘရားသား၊ ရှား ဘရားသား၊ သားသား၊ နာနီပါး၊ မဟာရွှေ၊ ဟာဂျီဝလီ စသည့် ခရီးသွားကုမ္ပဏီ ၂၂ ခုက လူတဦးလျှင် ကျပ် သိန်း ၃၀ မှ ကျပ်သိန်း ၅၀ အတွင်း အခကြေးငွေယူကာ ပို့ဆောင် ပေးနေခြင်းဖြစ် သည်။
ဘုရားဖူးအဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်သည့် အသက် ၇၂နှစ် အရွယ် ဦးသန်းရွှေကလည်း“အသက်ကြီးတော့ ဘာသာရေးကျင့်စဉ် တခုကို ပြင်းပြင်းပြပြ လိုချင်တာပါ၊ ဟာ့ဂ်ျ ကိုယ်စားလှယ် ခရီးသွားကုမ္ပဏီတွေက ခပ်လွယ်လွယ်လုပ်လိုက်တော့ ယုံကြည်ချက်ကို ထိခိုက် တယ် လို့ ခံစားရတယ်”ဟု ဆိုသည်။
လာမည့်နှစ်တွင်လည်း ဆော်ဒီအာရေဗျ နိုင်ငံ ဟာ့ဂ်ျ ခရီးစဉ် သွားလိုသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံရှိ မည်သည့် ဟာ့ဂ်ျ ခရီးသွားကိုယ်စားလှယ်များကို ယုံကြည်၍ လုပ်ကိုင်ရမည်ကို မသိတော့ကြောင်း ဦးသန်းရွှေက ပြောသည်။
အစ္စလမ် ဘာသာတွင် ဟာဂျီ ဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်၏ အိမ်တော်သို့ သွားရောက်လည်ပတ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရပြီး ဥပုသ်လ၏ သတ်မှတ်ထားသည့် ၅ ရက်အတွင်း မက္ကာသို့ သွားရောက်ကာ ဟာ့ဂ်ျ ၀တ်ပြုကျင့်စဉ်ကို အောင်မြင်စွာ ပြုလုပ်မှသာ ဟာဂျီ တဦးအဖြစ် ရယူနိုင်သည့်အတွက် ဟာ့ဂ်ျ ခရီးစဉ်သွားရောက်လိုကြကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဘုရားဖူးခရီးစဉ် ဖျက်သိမ်းခဲ့ရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်မြို့ ဘိုကလေးဈေးလမ်းရှိ ရှား ဘရားသား ကုမ္ပဏီသို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းရာ တာဝန်ရှိသူတဦးက ဘုရားဖူးခရီးစဉ်ကို ဆော်ဒီအာရေဗျ နိုင်ငံနှင့် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်နေသည့် မြန်မာနိုင်ငံ ဟာဂျီ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသော ပုဂ္ဂိုလ်တချို့တွင် တာဝန်ရှိကြောင်း၊ မိမိတို့ ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် ခရီးသွား ၁၀၀ ကျော်ထံမှ လက်ခံထားသည့် ငွေကြေးများကို အမြန်ဆုံးပြန်လည်ပေးအပ်နိုင်ရန် စီစဉ်နေကြောင်း၊ ယခုအဖြစ်အပျက်နှင့် ပတ်သက် ၍ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရကြောင်း ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
အဆိုပါ ဖြစ်ရပ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး အစိုးရ အသိအမှတ်ပြုထားသည့် အစ္စလမ် သာသနာရေးကောင်စီသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းသော် လည်း ဆက်သွယ်၍ မရရှိပေ။
ပေးစာ - မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပေါ်သွားခဲ့တဲ့ ဟာဂ်ျခရီးစဉ် အခက်အခဲတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စူးစမ်းလေ့လာရင်းနဲ့ တကယ့် အမှန်တွေကို သိရပြီးတဲ့နောက် အများပြည်သူများကို သိရှိစေရန် အလို့ငှာ ပေးပို့လိုက်ပါတယ်။ တရားခံ အစစ်အမှန်ကို ဖေါ်ထုတ်နိုင်ကြပါစေ။
၂၀၁၁ ခုနှစ် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များ ဟဂ်ျဘုရားဖူး လေယာဉ်ခရီးစဉ် ပျက်ကွက်သည့် ကိစ္စတင်ပြခြင်း
ဆော်ဒီအာရေဗျ နိုင်ငံရှိ Mansik အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေကြောင်းလိုင်း ကုမ္မဏီနှင့် ရန်ကုန်မြို့ City World ခရီးသွား ကုမ္မဏီမှ ဦးခင်ရွှေ ဦးစီး၍ ကုမ္မဏီ ၂၁ ခုနှင့် ပူးပေါင်း၍ ဟာဂျီဦးရေ (၄၃၁၅) ဦးအတွက် စင်းလုံးငှားလေယာဉ် (၈) စီးငှားရန် စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပါသည်။
ကုမ္မဏီ (၂၁) ခုက လေယာဉ်လတ်မှတ်ခကို Mansik ကုမ္မဏီသို့ကိုယ်စီကိုယ်စီ ပေးသွင်းခဲ့ပါသည်။ အသွားအပြန် ရက်စွဲကို ကုမ္မဏီအသီးသီးသို့ သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ဟာဂ်ျခရီးစဉ် သွားရောက်ခဲ့သော အချို့ ကုမ္မဏီများမှာ ယနေ့တိုင် လက်ကျန်ငွေပေးသွင်းရန် ကျန်ရှိသော်လည်း၊ ရန်ကုန်- မက္ကာဟ် ခရီးသွားကုမ္မဏီမှ ဟာဂျီ ၀လီကလည်း Mansik Company သို့ ယနေ့တိုင် US$ 40000 ပေးသွင်းရန် ပျက်ကွက်နေကြောင်းကို Mansik Company တာဝန်ခံထံမှ ကြားသိရပါသည်။
၁။ Mansik လေကြောင်းလိုင်း ကုမ္မဏီမှ တာဝန်ခံများသည် မြန်မာပြည်မှ ဟာဂျီများ ခရီးစဉ်ချောမွေ့စေရန်နှင့် အဆင်ပြေစေရန် လေယာဉ် အတက်၊ အဆင်းကိစ္စ လေကြောင်းလိုင်း ကိစ္စရပ်များကို ကြိုတင်ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်ရန် မြန်မာနိုင်ငံသို့ အချိန်မီလာရောက်နိုင်ရန်အတွက် ဆော်ဒီနိုင်ငံရှိ ရီယာဒ်မြို့ရှိ မြန်မာသံရုံးတွင် Visa လျှောက်ထားခဲ့ရာ Visa မရ၍ ခရီးစဉ် နှောင့်နှေး ကျန့်ကြာခဲ့ပါသည်။
Gulf Company မှ ကိုကိုလတ်ဆိုသူသည် PIA လေကြောင်းလိုင်း ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်ကြောင်း Mansik Company တာဝန်ခံကို Visa မပေးရန် မြန်မာသံရုံးသို့ ကိုကိုလတ်က တားမြစ်၍ သတင်းပေးပို့ခဲ့ပါသည်။
၂။ Mansik Company က မြန်မာနိုင်ငံသို့ အချိန်မီ မရောက်နိုင်ကြောင်း လေယာဉ်ခရီးစဉ် အလျင်မီ ဆောင်ရွက်ရန် အခက်အခဲ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
၃။ လေယာဉ်ခရီးစဉ် နှောင့်နှေးကျန့်ကြာနေသည့် အချိန်တွင် ကိုကိုလတ်(Gulf Company) က အခွင့်ကောင်း အပြည့်အ၀ယူ၍ လူအင်အား စုဝေးပြီး တာမွေမြို့နယ် မအူကုန်းလမ်းကျယ်တွင်ရှိ City World Company ရုံးခန်းရှေ့တွင် လူစုလူဝေးဖြင့် ပြသနာဖြစ်အောင် ဖန်တီးခဲ့ပါသည်။ ၄င်းနောက် ကိုကိုလတ်(Gulf Travel Tour Company) က လက်ကမ်းကြော်ငြာ လိုက်လံဝေငှပြီး ၄င်းကြော်ငြာတွင် အေးဂျင့်များအား လတ်မှတ်မရောင်းပါ၊ ဟာဂျီများသာ ရောင်းပေးမည်။ တစ်ဦးလျှင် US$ 1550 ဖြင့် လေယာဉ်လက်မှတ် စီစဉ်ပေးမည်ဟု စည်းရုံး အယုံသွင်းကာ လတ်မှတ်ရောင်းချပေးခဲ့ပါသည်။
၄။ ဦးခင်ရွှေ(City World Company) စီစဉ်ထားသော လေယာဉ် (၈) စီးမှ လေယာဉ် (၂) စီးစာ ခရီးသည်ကို Gulf Company ကိုကိုလတ်က စီစဉ်ပေးမည်ဟု ပြောဆိုကာ ပြည်သူ့မေတ္တာ ကုမ္မဏီမှ ဟာဂျီနာနီးပါးနှင့် Multi Point Company မှ ဟာဂျီလာလ်ဘိုဒီ တို့က Mansik Company မှ လေယာဉ်လတ်မှတ်ဖိုးငွေကို ပြန်လည်ထုတ်ပေးပါဟု ဦးခင်ရွှေအား ပြောဆို၍ တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဦးခင်ရွှေက Mansik Company သို့ အချိန်မီ အကြောင်းကြားခဲ့၍ ငွေလည်းရရှိခဲ့ပါသည်။
၅။ Mansik Company ဧ။် လေယာဉ် ၈ စီးမှ ၂ စီး မစီးဖြစ်ပါသဖြင့် ဦးခင်ရွှေက ကျန်ရှိသော ဟာဂျီများအတွက် လေယာဉ် ၆ စီးအချိန်မီ စီစဉ်ခဲ့၍ (ရက်) အတိအကျကိုလည်း စီစဉ်ပေးခဲ့ပါသည်။
၆။ ကိုကိုလတ် စီစဉ်ထားသော လေယာဉ် ၂ စီးမှာ ယခင်အမှန်တကယ် စီစဉ်ထားခြင်း မရှိဘဲ PIA လေကြောင်းလိုင်းသို့လည်း ငွေပေးသွင်းထားခြင်း မရှိခဲ့ပါ။
၄င်းကြောင့် လေယာဉ် ၂ စီး (ခရီးစဉ်) လုံးဝ ပျောက်ဆုံးသွားရပါသည်။ အမှန်တကယ် ငွေသွင်းထားသော Mansik Company နှင့် ဆက်သွယ်ထားသော၊ အေးဂျင့်နှင့် ဟာဂျီများ ဟဂ်ျပြုလုပ်ရန် သွားရောက်ခဲ့နိုင်ခြင်း မရှိပဲ ငိုကြွေး နစ်နာ ကျန်ရှိခဲ့ရပါသည်။
၇။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် လေယာဉ်မစီးဖြစ်သော ကုမ္မဏီများ၏ ပြန်အမ်းငွေကို တချို့ကုမ္မဏီမှ ဟဂ်ျဗီဇာဖြင့် သွားရောက်၍ အချိန်မီ ထုတ်ယူရရှိခဲ့သော်လည်း တချို့ကုမ္မဏီများ ဟဂ်ျဗီဇာဖြင့် အချိန်မီသွားရောက်နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိ၍ ပြန်အမ်းငွေ ထုတ်ယူရန် အခက်အခဲ ဖြစ်နေပါသည်။
ပြန်အမ်းငွေ ထုတ်ယူရန် ကျန်ရှိသော ကုမ္မဏီများ ဆော်ဒီနိုင်ငံရှိ မိတ်ဆွေများနှင့် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲကာ ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း လူကိုယ်တိုင် လာရောက်ထုတ်ယူရမည်ဟုသိရှိရပါသည်။
ငွေပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ဆော်ဒီသံရုံးသို့ ကုမ္မဏီမှ အထောက်အထား အပြည့်အစုံဖြင့် ဗီဇာရရှိရန် ကြိုးစားသော်လည်း ဗီဇာယနေ့ထိ ရရှိခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်း တချို့ကုမ္မဏီများမှ တဆင့် ကြားသိရပါသည်။
ကုမ္မဏီများ၏ ပြောဆိုမှုမှာ မက္ကာဟ်ဟိုတယ်+မဒီနာဟိုတယ်+ဟာဂျီအာမခံကြေး+ ဆားဗစ်မိုအလ္လင်မ်ကြေး+ ကားအာမခံကြေး+သယ်ယူပို့ဆောင် ၀န်ဆောင်စရိတ်နှင့် အခြားအထွေထွေ ကုန်ကျစရိတ်များ ဟာဂျီများသွားရောက်ခဲ့ခြင်း မရရှိပါက ငွေများ ပြန်လည် မရရှိနိုင်ပါ။ ကုမ္မဏီများ များစွာ နစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ယခုအခါတွင် အဖွဲ့အစည်းအသစ် တည်ထောင်သည်ကို သိရှိရပါသည်။
ဤဟာဂ်ျစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့သည် နိုင်ငံတော်မှ အသိအမှတ်ပြု ဖွဲ့စည်းပေးထားပါသလား သိချင်ပါသည်။ တချို့ဂျာနယ်တွင် စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ ပြောကြားခဲ့သည်မှာ ဟာဂျီများကို ဟာဂ်ျကုမ္မဏီမှ ရန်ကုန်လေဆိပ်ထဲတွင် visa မရှိ၊ လေယာဉ်လတ်မှတ်မရှိပဲ နာရီ ၃၀ လေဆိပ်တွင် စောင့်ဆိုင်းပြီး လေယာဉ်မရောက်လာသဖြင့် အိမ်လှည့်ပြန်ခဲ့ရသည်ဟု မီဒီယာများကို ပြောဆို ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ လေယာဉ်လတ်မှတ် နှင့် ဗီဇာပါမှသာ လ.၀.က အထွက်တုံး ထုပေးပါသည်။ လေဆိပ်အတွင်းထဲ ၀င်ခွင့်ရှိပါသည်။
ကိုကိုလတ် ထံမှတဆင့် ကြားရသည်မှာ သူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေဖြင့် လေယာဉ်ငှားရမ်းခဲ့သည်ဟု ပြောပါသည်။ သူမည်မျှ ချမ်းသာပါသနည်း။ သူတပါး၏ ငှားရမ်းထားသော လေယာဉ်ကိုတောင် မသမာသော နည်းလမ်းဖြင့် လုယူခဲ့သောသူ ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ်က အေးဂျင့်နှင့် ဟာဂျီများ ကိုကိုလတ်ကြောင့် ဗီဇာမရရှိပဲ လေယာဉ်လတ်မှတ် ပြန်အမ်းငွေ ယနေ့ထိ မရရှိသေးကြောင်း ကျွန်တော်၏ မိတ်ဆွေ အေးဂျင်စီတစ်ခုမှ ကြားသိရပါသည်။
Source : Irrawaddy News & Blog
Burma on the brink - (abc Australia - Talk about Burma & Rohingya)
ABC Australia Talk about Burma & Rohingya
Will Burma’s press be free after new media reform bill?
he third regular session of the first Pyithu Hluttaw (Lower House) and the third regular session of first Amyotha Hluttaw (Upper House) opened at the Pyithu Hluttaw Building in Nay-Pyi-Taw, Thursday. President of Myanmar (Burma) Thein Sein sentamessage to the Speakers of the Lower and the Upper Parliaments, the New Light of Myanmar said on Friday.
The President said in his message: “In successfully reforming the all sectors of the nation for the sake of the people and the nation, we had to promulgate 15 new laws and make amendments and supplements.”
The junta-sponsored existing parliament allows 330 civilian seats in the 440-member House of Representatives (Lower House). Under the 2008 constitution, the remaining 110 seats are filled with appointed military officers. In the 224-seat House of Nationalities (Upper House), 168 are elected and 56 are appointed by the boss of the armed forces. Remarkably, 77% of the parliamentary seats have been seized by the military-backed Union Solidarity and Development Party (USDP) in the 2010 November polls which were distinguished for vote-rigging prescription.
When the new parliament first started opening on January 31 2011, tight security had been set up around the parliament building as part of the measures foragrand scale celebration. At that time, the area around the Naypyitaw was under surveillance with army units patrolling day and night.
There were even restrictions on the members of parliament, according to invitations delivered to MPs calling them for the first parliament sessions. The new MPs were not allowed to carry cameras, computers, mobile phones, radios, voice recorders, electronic gadgets, handbags and miscellaneous items.
During that first parliamentary session, no visitors were allowed into the parliamentary compound. Uninvited guests might riskaprison term under rules made clear to lawmakers; authorized officials said even senior military officers were not permitted to go through without special permission.
For the period of that first parliamentary session, 18 reporters from domestic and foreign news agencies arrived in Naypyidaw, according to Mizzima News. But, the journalists did not receive permission from the Information Ministry to cover the historic first sessions which assembled for the first time in 22 years on January 31, 2011.
Additionally, reporters were not allowed to take photographs near the Parliament building. Only four reporters from state-run Myanmar Radio and Myawaddy TV were given permission to cover the Parliament. They were not even allowed to enter the Parliament and had to shoot their video fromaroom surrounded by glass, Mizzima said.
One remarkable thing is that on this latest third regular assembly of the first parliament sessions, mobile phones were allowed use in the parliament building, but agree holding devices without disturbance to the parliament discussion, the Eleven Media Group (EMG)news said Friday.
Moreover, not only domestic correspondents but also foreign reporters have been allowed to cover the news on the parliament discussions during this House Sessions. Media personnel were placed at the top floor above the parliament assembly hall. They were also allowed to carry cameras, video-cameras, computers, voice recorders and other necessary papers.
Apart from the 26 domestic reporters, there are altogether eleven reporters from foreign news agencies, including Mr. Jason Szep (Southeast Asia Bureau Chief) from Reuters News of Britain, Mr.Toru Kitamura from Tokyo Broadcasting System (TBS), Mr.Tetsuo Okabe fromJi Ji News Agency Japan, Mr. Yuzo Yamashita from Nippon Television Network (NTV) and Ms.Lin Xi from China Central Television (CCTV), according to EMG news.
Since the new Thein Sein government came to power in March 2011 after the controversial 2010 November elections, Burma’s authorities have madeaminor moderation to the rigid censorship rules for certain publications, while keepingatight grip on news journals.
In an interview by telephone on Wednesday, Tint Swe, director of the Press Scrutiny and Registration Department (PSRD), repeatedly told Radio Free Asia (Burmese Service) that claiming freedom of expression in Burma will be better after the new Press Law, which is still in the process of being endorsed in the parliament.
PSRD’s director said that the press law had already been drafted by Burma’s Ministry of Information and sent to the Attorney General’s office for approval. After adopting the media reform bill, the role of Press Scrutiny and Registration Department will be finished, Tint Swe told RFA.
Source here Read More
ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခြင်းအဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရန်ဟု ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဆို
Photo : EMG
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ပထမဆုံး ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်ခရီးစဉ် အဖြစ်ထားဝယ် မြို့သို့ရောက်ရှိစဉ်အတွင်း ပြောကြားသည့် မိန့်ခွန်း၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရွေးကောက်ပွဲဝင်သည့် အဓိကဦးတည်ချက်မှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအထဲမှ ပြည်သူများအကျိုးမဖြစ်စေသည့် အပိုင်းများအား ပြုပြင်ရန် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသွားသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က “ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့ အခါမှာ အရေးကြီးတဲ့ ဦးတည်ချက်တစ်ခုဆိုပြီးတော့ သတ်မှတ် ထားတာကတော့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာ ပြည်သူတွေကို အကျိုးမဖြစ်စေတဲ့ အပိုင်းတွေကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ပဲ။ ဒါကျမတို့ လုပ်ကို လုပ်ရမယ်လို့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်” ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ပက်သက်၍ NLD ၏ သဘောထားကို ထားဝယ်မြို့၌ ပြောကြားသွားသည်။
ထို့ပြင် နိုင်ငံရေးပါတီတရပ်အနေဖြင့် ပြည်သူ့နှင့် နီးနီးစပ်စပ်နေနိုင်မှ အရည်အချင်းရှိသည့် ပါတီတရပ်ဖြစ်မည်ဟုလည်း ပြောဆိုသွားသည်။ “ ကျမတို့အခု တနင်္သာရီကို ဆင်းလာရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ ပြည်သူနဲ့ပြန်ပြီးနီးစပ်ဖို့ပဲဖြစ်တယ် “” ၎င်းက ပြောကြားသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထားဝယ်မြို့သို့ ယနေ့ လာရောက်သော ခရီးစဉ်တွင် ထားဝယ်မြို့သာမက လောင်းလုံမြို့၊ မောင်းမကန် ကမ်းခြေတို့အထိ သွားရောက်ခဲ့ရာ လေဆိပ်မှ ထားဝယ်မြို့တွင်း၊ လောင်းလုံမြို့ နှင့် မောင်းမကန်ကမ်းခြေသို့ ခရီးစဉ် တစ်လျှောက် ပြည်သူ သောင်းနှင့်ချီ၍ စုဝေး၍ လိုက်ပါခဲ့ကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။
လာမည့် ဧပြီလ (၁) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်သော ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး ၉ ခုရှိ မြို့နယ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်ရှိ လစ်လပ်နေရာ ၄၈အနက် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ထားဝယ်ခရိုင်၊ လောင်းလုံမဲဆန္ဒနယ်တွင် NLD ပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးအောင်စိုးမှ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ပက်သက်၍ “ လုပ်ပေးချင်တဲ့စေတနာရှိရုံနဲ့ မပြီးပါဘူး။ လုပ်တတ်ကိုင်တတ်မှ ဒီစေတနာကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှာပါ “ ဟု ထားဝယ် NLD ရုံးခွဲတွင် ပြောကြားသောမိန့်ခွန်း တွင် ထည့်သွင်းပြောကြားသွားသည်။
“ အခုလိုမျိုးလာလိုက်တော့ လူတွေရင်ထဲမှာ ရင်းရင်းနှီးနှီးရှိသွားတာပေါ့။ နောက် Generation တွေက တစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးဘူးလေ။ အဓိက ကတော့ မဲဆွယ် ဖို့လာတာပေါ့လေ။ ခုလိုမျိုး လူထုအားပေးမှုနဲ့ဆိုရင်တော့ နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ ” ဟု ထားဝယ်ဒေသခံ အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မဲဆွယ်ခရီးစဉ်နှင့် ပက်သက်၍ ပြောဆိုသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ယနေ့ခရီးစဉ်တွင် ထားဝယ်မှ တဆင့် လောင်းလုံမြို့နယ် အောက်ရေဖြူကျေးရွာ၊ ထိုမှ မောင်းမကန်သို့ နေ့လည်တစ်နာရီခန့်တွင် ရောက်ရှိပြီး ညနေ (၃) ခွဲ ၀န်းကျင်ခန့်တွင် ထားဝယ်မြို့ သို့ရောက်ရှိကာ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းတွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းနောက်တွင် ညနေလေယာဉ်ဖြင့် ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြန်လည် ထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၂၀၁၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် မှ လွတ်မြောက်လာပြီးနောက် ပဲခူးမြို့ခရီးစဉ်သည် ရန်ကုန်မြို့ပြင်ပ သို့ပထမဆုံး သွားရောက်သည့် ခရီးစဉ်ဖြစ်၍ ယခုထားဝယ်ခရီးစဉ်သည် နယ်လူထုနှင့်ထိတွေ့သည့် ဒုတိယမြောက် ခရီးစဉ်ဖြစ်သည်။
Source :Yangon Press International Read More
ဦးကျော်မင်းနှင့်မိသားစုဝင်များသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ (၁၃) ရက်နေ့တွင် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင်ဖြင့် မြင်းခြံအကျဉ်း ထောင်နှင့် အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်တို့မှ လွတ်မြောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဦးကျော်မင်းသည် ၁၉၉၀ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် အမှတ် (၁) မဲဆန္ဒနယ်မှ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကိုယ်စားပြု၍ ရွေးချယ်တင်မြောက်ခံခဲ့ရသော အမတ်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မီတီ (စီအာရ်ပီပီ) အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။
ဦးကျော်မင်းကို ၂၀၀၅ ခုနှစ် မတ်လ (၁၇) ရက်နေ့တွင်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါသည်။ ဦးကျော်မင်းကို ၂၀၀၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၂၉) ရက်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းအနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှ ထောင်ဒဏ် ၄၇ နှစ်နှင့် ဒဏ်ငွေ ၅ သောင်းချမှတ်ခဲ့သည်။ ဦးကျော်မင်း၏ မိသားစုဝင်များကို ၂၀၀၅ ခုနှစ် မေလ (၁၆) ရက်နေ့တွင် ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ထောင်ဒဏ် ၁၇ နှစ်စီ ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။
ဦးကျော်မင်းကိုဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခဲ့ခြင်း အဓိကအကြောင်းရင်းနှစ်ရပ်မှာ (၁) ၂၀၀၅ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုနေ့တွင် စီအာရ်ပီပီ၏သဘောထားကျေညာချက်ထုတ်ပြန်ရာတွင် အဓိကပါဝင်ကူညီခဲ့ခြင်း (၂) ၂၀၀၅ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၁ ရက်နေ့မှ ၂၃ ရက်နေ့များတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာသော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း တို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဦးကျော်မင်းသည် ၁၉၆၈ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှ စီးပွားရေးဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့ပြီး၊ ၁၉၆၉ ခုနှစ်မှစတင်ပြီး စစ်တွေမြို့တွင် ကျောင်းဆရာအဖြစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုခဲ့သည်။ ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် ပညာရေးဒီပလိုမာကိုရရှိခဲ့ပြီး ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်တွင် လက်ထောက်ပညာရေးမှူးအဖြစ်အမှုထမ်းခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် ၈၈ အရေးအခင်း နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများ၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်ကျောင်းဆရာများသမဂ္ဂတို့တွင်ပါဝင်လှုပ်ရှားမှုများကြောင့် အလုပ်မှထုတ်ပယ် ခြင်းခံခဲ့ရသည်။
Burma Has Shown Progress in Move Towards Democracy by U.S Senator Mitch McConnell
Press ReleasesJan 26 2012
U.S. Senate Republican Leader Mitch McConnell made the following statement on the Senate Floor Thursday regarding his meeting in Burma with Nobel Laureate Daw Aung San Suu Kyi and the steps the oppressed country has taken towards formingademocratic society: Washington, D.C.– U.S. Senate Republican Leader Mitch McConnell made the following statement on the Senate Floor Thursday regarding his meeting in Burma with Nobel Laureate Daw Aung San Suu Kyi and the steps the oppressed country has taken towards formingademocratic society:
“I want to briefly address my colleagues onavery important trip I took recently toacountry that, for much of the past 50 years, has ranked among the world’s most isolated and oppressed by its own government. Many of us wondered if things would ever change in Burma. But after my recent visit, I’m pleased to say that change is clearly in the air.
“It appears that Burma has made more progress toward democracy in the past six months than it has in decades. As one who has takenastrong interest in Burma for over 20 years, and as the lead author in this chamber of an annual sanctions bill aimed at encouraging the Burmese government to reform, this is welcome news.
“On this trip I had the great honor and privilege to meet the woman who, for over two decades, has embodied the struggle for peace in her oppressed country.
“After Daw Aung San Suu Kyi’s political party won 80 percent of the vote inafree and fair election in 1990, the Burmese military regime dismissed the results and kept her under house arrest for most of the last 22 years. Scores of other political reformers were jailed or tortured, and the regime wagedabrutal campaign against ethnic minorities, driving many from their homes to refugee camps.
“But by her courage and patience that justice delayed would not be justice denied, Daw Aung San Suu Kyi has kept the hope of freedom in her country alive.
“I’ve long admired Daw Aung San Suu Kyi from afar. She once tookagreat risk to smuggle out of Burmaaletter thanking me for my support,aletter I proudly have to this day. But never, Mr. President, did I think I would get to meet the Nobel Laureate in person. It was quiteamoment.
“Following an election in 2010 that was widely thought to be unfree and unfair, the new civilian government in Burma has made undeniably positive steps toward reform. In addition to releasing Daw Aung San Suu Kyi from house arrest, scores of other political prisoners have been freed. In my visit, I spoke with two who had just been released days before my arrival.
“And one of the longest-standing armed conflicts in the world—the Burmese government’s campaign against the ethnic minority called the Karen—has apparently been brought toaclose.
“Many Karen people who have fled Burma now call Kentucky home. I had the chance to meet with many of them, and other refugees from Burma now resettled in Kentucky, at Louisville’s Crescent Hill Baptist Church this Saturday. I enjoyed meeting them and was pleased to relay to them the same message I share with my colleagues today—that change is in the air for their country.
“Because of all these positive developments, I applaud Secretary of State Hillary Clinton’s recent decision to exchange ambassadors with Burma for the first time in 20 years.
“Of course, the government of Burma still hasasubstantial way to go to achieve real, lasting reform. I would not support, and I don’t think the administration would support, lifting the sanctions that have been imposed unless there is much further progress.
“The next test will be elections to fill 48 seats of the national parliament on April 1. Daw Aung San Suu Kyi intends to run as the representative ofadistrict withasignificant Karen population.
“This election will give the new government an opportunity to hold the first free and fair elections in Burma since 1990, and also demonstrate the seriousness of its recent reform efforts.
“The government must also fully and peacefully reconcile with Burma’s ethnic minorities. This is vital.
“Reports indicate that the military continues to engage in hostilities with the Kachin. That is troubling. And questions about Burma’s relationship with North Korea must be answered.
“As the new government enacts reforms, we should respond with meaningful gestures of our own in hopes of encouraging further positive developments from Burma’s leaders. Reformers like new president Thein Sein, whom I also met on my trip, are strengthened when they can show results. Steps like exchanging ambassadors with the United States would enable them to do just that.
“My trip to Burma has filled me with hope for its people—hope that they will one day be free to elect their own leaders, and hope that every person, regardless of ethnic group, can enjoy equal rights and full protection under the rule of law.
“It also reaffirmed for me that the desire to be free is universal, and that the patient, yet persistent leadership of one woman can makeatremendous difference.
“These are exciting times for all who care about the future of the people of Burma, Mr. President. I know that includesagreat many of my colleagues. Burma has quitealong way to go, but it is moving in the right direction.
ဒီမိုကရေစီ ဦးတည်တဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေ တွေ့ကြောင်း အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ်ပြော
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းကို ဦးတည်တဲ့ ပြောင်းလဲ တိုးတက်မှုတွေကို တွေ့လာရကြောင်း အမေရိကန် အထက် လွှတ်တော်အမတ် Mitch McConnell က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် Mitch McConnell က ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၂၆ ရက်နေ့ အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်တွင် မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း ဆွေးနွေး တင်ပြစဉ်။
မြန်မာနိုင်ငံက ပြန်ရောက် လာပြီးနောက် မနေ့က ကျင်းပတဲ့ အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော် ဆွေးနွေး တင်ပြချက်မှာ မစ္စတာ မက်ကော်နယ်လ်က အခုလို ပြောကြား လိုက်တာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ဦးတည်တဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေဟာ အရင် ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာထက် ပြီးခဲ့တဲ့ ၆ လအတွင်း အများကြီး တိုးတက် လာတာ တွေ့ရကြောင်း၊ ပြီးခဲ့တဲ့အနှစ် ၂၀ အတွင်း မြန်မာ့အရေး စိတ်ဝင်တစား ဆောင်ရွက်ခဲ့သူ၊ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ပိတ်ဆို့ အရေးယူရေး ဦးဆောင် ကြိုးပမ်းခဲ့သူ တစ်ဦးအနေနဲ့ ဒီအချက်ဟာ ကြိုဆိုရမယ့် ကိစ္စဖြစ်ကြောင်း မစ္စတာ မက်ကော်နယ်လ်က ပြောပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး မစ္စတာ မက်ကော်နယ်လ်က အနှစ် ၂၀ လောက် မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ သံတမန် ဆက်ဆံရေးအဆင့် နှိမ့်ထားရာက အခု သံအမတ်ကြီးအဆင့် ထားရှိဖို့ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ဟီလာရီကလင်တန်က ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာကိုလည်း ကြိုဆို လိုက်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးအရ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုတွေ ရှေ့တိုးလုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်နေသေးတဲ့အတွက် မိမိတို့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက ပိတ်ဆို့ အရေးယူထားတာတွေ ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ကိုတော့ ထောက်ခံဦးမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ သူက ပြောပါတယ်။